Istudiyo esilungisiweyo iLe Bristol kunye nepuli yabucala - I-Airbnb
Istudiyo esilungisiweyo iLe Bristol kunye nepuli yabucala
Ikwindawo yokuhlala kanokutsho eLe Bristol, kumgangatho wesibini enelifti, yiza wonwabele le ndawo intle elungisiweyo neqaqambileyo eyi-24 m studio, kunye nendawo yayo esemazantsi ejonge entabeni evulekileyo.
Inendawo yokungena enekhabhathi enkulu kunye neebhedi ezimbini ezikhweleneyo. Igumbi lokuhlala, elahlulwe ngomnyango otyibilikayo, linesofa ekwayibhedi evulekileyo eyi-160.
Ngokuhlwa okufudumeleyo, yonwabela i-raclette kunye neeseti ze-fondue. Ndicebisa iVacherie d 'Isola 2000 (ekwindawo ephakathi yeresort) ukuba iode itshizi yakho, inyama ephilisiweyo, njl.
Zonke izinto eziyimfuneko zilahlwayo kuwe (ikofu, ityuwa, ipepile, ioyile, iviniga, imveliso yokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba izitya nowokuhlamba impahla, isepha, i-shower gel, iiplastiki zenkunkuma, iphepha langasese...).
Uza kukwazi ukufikelela kwipuli yabucala nenamanzi ashushu kunye nesauna (ukususela ngoJulayi ukuya kuAgasti ukususela ngoDisemba ukuya kutsho ngoMatshi, ukususela ngo-9: 30 kusasa ukuya ngo-8 ebusuku) kwindawo ohlala kuyo ukuze uphumle emva kosuku lokutyibiliza ekhephini okanye ukunyuka intaba. Unendawo yokutshixa ekhephini emnyango wokungena kwisakhiwo, ukuze kungabikho zinto ziphazamisayo kwizixhobo zakho.
Ebusika, ekwiimitha eziyi-200 ukusuka kumathambeka, uza konwabela enye yezona ndawo zintle zokutyibilika ekhephini eSouthern Alps. Iithambeka eziyi-45 ukusuka kwi-2000 ukuya kwi-2610 m ngaphezu kolwandle, iikhilomitha eziyi-120 zamathambeka, iilifti eziyi-20 ze-ski, bonke abathandi be-ski baya konwaba.
Ungaya nokutyibilika ekhephini, ukutyibilika ekhephini, ukutyibilika ekhephini, ukutyibilika emkhenkceni, njl.
Ehlotyeni, iindlela zebhayisekile zasezintabeni zenzeka kumathambeka e-ski. Ipaki Yebhayisekile inamazinga ayi-10 ahlukeneyo. Iindlela ezininzi zokunyuka intaba zimele zithathwe kwi-resort. IMercantour Park iyabiza. Abathandi bezilwanyana zasendle baza konwatyiswa bubukho be-chamois, i-marmots, i-bex, i-gypaet enentshebe, njl.
Izinto ezongezelelweyo zininzi, i-archery, i-tennis, ukunyuka intaba, ukukhwela ihashe, ukunyuka imithi, ukuhamba ngebhayisekile yabantwana, ukukhwela i-pony ...
Iflethi ikufutshane neevenkile ezinkulu nazo zonke iivenkile zayo. Ukutya, iibhari, iivenkile zokutyela, iivenkile zezinto ezibhakiweyo, igumbi lokuphulula izihlunu, amayeza, izixhobo zokuqeshisa...yonke into ukuze uhlale kamnandi.
Indawo yokuhlala igcinwe ize igcinwe.
Ukucocwa kweflethi okanye indlu ekwicomplex kuza kwenziwa nguwe (yonke into oyifunayo iyafumaneka kwisayithi).
Qaphela, kuza kufuneka ukhumbule ukuzisa iitawuli namashiti ngokuvumelana nokuba bangaphi kuni (imiqamelo, iiduvethi neengubo ziyafumaneka) :
1 iduveyi cover 240xwagen + 160 ishiti elifakiweyo
Iiduveyi ezimbini zigquma iiduveyi + amashiti ayi-2 afakelweyo 90
I-Rectangle 50x70 Izikwere eziyi-2 ziquka i-60 x 60
Kwiyure nje eyi-1.5 ukusuka e-Nice nakwisikhululo seenqwelo-moya sayo, i-Isola 2000 yindawo yemidlalo yasebusika, ehlotyeni nasebusika, ubukhazikhazi nokuthembeka kwe-Southern Alps.
Uphefumlelwe elangeni leFrench Riviera, uza konwabela le flethi okanye indlu ekwicomplex efanelekileyo yabantu abayi-4.
Omnye umntu kwiwebhsayithi uza kwamkela kwaye unokuqhagamshelana nawe ukuba kuyimfuneko
Inombolo yomthetho: 06073016871MX
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Isola